"Marka sheekhoodii (Cabdicasiis Samaale) cadaw noo malaynayo jabhaddoodiina maxaad u malaynaysaa? "Xog-hayaha guud ee Xisbiga WADDANI Khadar Cabdi Xusseen - somalilandlivemedia
16:22 12. March 2019
Hargeysa (SLL) Xoghayaha guud ee xisbiga WADDANI Mudane Khadar Xuseen Cabdi (Looge) ayaa sheegay in maamul xumada Xukuumadda Kulmiye ay ka muuqdaan astaamaha ay leeyihiin dalalka ama ummadaha burburaya. Waxa uu sheegay in madaxweyne Biixi iyo siyaasiyiinta la fikirka ahi yihiin kuwo cadhaysan oo ciil u qaba qaybo ka mid ah bulshada Somaliland.
Xoghaye Khadar oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta guud ee xisbiga WADDANI ayaa ka warramay xaaladda Macallin Cabdiqaadir Nuur Maxamed iyo Abwaan Baashe Xasan Maxamed oo dhawaan Maxkamadda Racfaanka gobolka Maroodijeex ku xukuntay midkiiba 8 sannadood oo xadhig ah iyo lacag dhan 625,000 doollar oo ay saaka xabsiga ku bookhdeen masuuliyiinta xisbiga WADDANI “Saaka waxaan xabsiga ugu tagay Abwaan Baashe iyo Macallin Cabdiqaadir oo labadoodaba xukun caddaalad darro ah oo arxan darro ah oo garaadka, mandaqa iyo caqliga qof kasta oo wax garad ah oo reer Somaliland ah, mushtamaca muslimiinta iyo qof kasta oo kale oo wax garanayaba ka baxsan lagu xukumay oo cadawtinimo runtii ka muuqato. Waxaanu ku faraxsanahay in ay noo sheegeen in askarta jeelka joogta si fiican ula macaamilaan oo dad wanaagsan ay yihiin anaguna bookhashadii aanu ugu tagnay askarta waan uga mahad naqayna sidii wanaagsanayd ee ay noo qaabileen ee ay noo soo dhaweeyeen.
Waxa kale oo aan saaka la kulmay qoysaskoodii; Baashe wuxuu ahaa Aabbe toban carruur ah haysta. Isaga ayaa u shaqayn jiray oo masuul carruurtiisa u ahaa oo nin xoogsada oo wastaad ah ahaa oo guryaha la dhisayo ka shaqaysta, macallinkuna iskuul ayuu bare ka ahaa. Waxa aynu ognahay oo aynu naqaana macallinku in uu qaato wax boqol dollar ka yar, caqliga dhigaya qof shaqaale dawladeed ah oo 100 doollar wax ka yar qaata in lagu xukumo in uu bixiyo ganaax ah lix boqol oo kun oo dollar lacag ka badan in uu bixiyo oo aan ahayn cadawtinimo iyo arrin gun dheer oo ujeedo kale laga leeyahay anigu ma garanayo,” Sidaas ayuu yidhi Xoghaye Khadar oo intaasi raaciyay in haddii la qiyaaso noloshiisa inta uu shaqaynayo marka loo eego shaqaale dawladeed aanay bixinayn lacagta lagu ganaaxay taasna ay muujinayso sida ay u kala fog yihiin waaqica dalka yaalla iyo dadka wax xukumaya.
Xoghayaha WADDANI waxa uu sheegay in ay jiraan muwaadiniin badan oo sharci darro ku xidhan waxaanu si gaar ah ugu baaqay in xukuumaddu dawayn u ogolaato sheikh Aadan Sunne lana baadho in jidh dil ay u gaysteen ilaalada xabsiga uu ku jiro.
Waxa uu xoghayuhu sheegay in Somaliland oo muddo dheer dawladnimo haysatay wali muwaadiniinta lagu xukumo xeerkii Siyaad Barre oo xataa la tahli kari waayay in jaldiga oo ay Jamhuuriyadda Soomaaliya ku qoran tahay laga bedelo “Dulmigu magacyo ma kala laha; qofka muwaadinka ah haddii la dulmo yaa ku dulmay ma laha ee waa wuxu dulmi ma yahay? Shalay haddii Siyaad Barre lagu diidana in uu dulmi samaynayo, haddii lagu diidana in uu eex samaynayo, haddii lagu diidana in uu qabyaalad samaynayo, haddii lagu diidana in uu dad gaar ah si gaar ah u eeganayo maanta intiiba Waddankeena ayay ka jirta. Taas ayaa muujinaysa gunta waxa lagu haysto Abwaan Baashe oo ah in uu nin WADDANI ah ahaa, in uu tiriyay gabayo uu WADDANI ku taageerayo xilligii ololaha doorashada,” Sidaas ayuu yidhi Xoghaye Khadar.
“Taariikhda in aynu wax ka barano ayaa wanaagsan Adduunka iyo hareeraheena waxa ka dhacayana in aan wax ka ogaano ayaa fiican. Maanta haddii qof xanuunsado oo xanuunka hayaa Kaneeco yahay waxaynu naqaana astaamaha xanuunka ka muuqda xumad ha noqoto ama dhaxan iyo qandho ha noqotee, dawladaha dumaya ee baaba’ayana astaamo ayay leeyihiin la daraaseeyay oo la yaqaanno maantana waddankeena si fiican uga muuqda haddii aan waxaa la joojina ay dawladnimadeenu dumi doonto. Waxa arrimaha wax ka qoray nin Jaamacadda Maraykanka ee Harvard macallin ka ahaa qaybta maamulka waxaanu ka hadlaya umaddaha dumaya astaamaha ay leeyihiin oo aan 3 ama 4 qodob idinla wadaagi doono; Astaamaha waxa kow ka ah haddii aad aragto ummad dad gaar ah si gaar ah waxyaabihii waddanku lahaa ee khayraadka iyo ilihii gacanta loogu gelinayo umadda dadka maamula sidaas ku dhaqmaan waa umad dumaysa;
Haddii aad aragto umad garsoorkeedii iyo caddaaladdeedii waaxda fulinta ama xukuumadda u shaqaynayaan oo xukuumaddu waxay tidhaahdo sameeya ay samaynayaan oo aanay ka madax bannaanayn waa umad iyaduna jabaysa, waxa iyaduna ka mid ah in aan sharciga la ixtiraamin,” Sidaas ayuu yidhi xoghaye Khadar oo intaasi raaciyay in ay arrimaha burburka keena ka mid yihiin in ila dhaqaalaha dad gaar ah loo xidho sida hadda muuqatana Tamarta iyo xadhkaha Internetka dad gaar ah loo xidhay sidoo kalena astaamaha ay ka mid yihiin in dawladnimada iyo talada ay dad gaar ahi isa siiyaan.
Waxa uu sheegay in dhammaan astaamahaasi hadda muuqdaan oo dadka lagu xidhxidhayo aragtiyahooda lana kormeerayo baraha bulshadu waxyaabaha ay dadku ku qorayaan. Waxa uu tilmaamay in sharci jabinta dalka ay markhaati ka tahay in masuuliyiin aanu sharcigu u ogolayn madaxweynaha kala qayb galeen shirkii golaha dhexe ee Kulmiye, islamarkaana aanu ilaa hadda madaxweynuhu waxba ka qaban.
“Illaahay ayaa Qu’aankiisa inagu leh cadhada iyo xumaha aad cid u qabtaan yaanay idinka kaxaynin caddaaladda laakiin, maanta waxa muuqata in madaxweynuhu cadhaysan yahay, cadhadaas uu cadhaysan yahayna ay ka kaxaysay in uu caddaaladda eego oo dadkiisa uu madaxweynuhu u yahay u caddaalad sameeyo in ay ka kaxaysay, dulmigaasna uu yahay mid isaga ku soo noqonaya oo berrito la waydiin doono. Ilmaha uu Baashe dhalay ee ooyaya ee habeen walba aabbihii tebaya ee gaajada ku seexanaya masuuliyaddiisu madaxweynaha ayay saaran tahay haddii aanu dareensanayna maalin kale ayuu ogaan doona,” Sidaas ayuu yidhi Xoghayaha WADDANI.
Waxa uu intaasi raaciyay xoghayaha xisbiga WADDANI in Soomaalidu waayo aragnimo fiican u leedahay dawlad Dunta maaddaama ay u soo joogtay burburkii Soomaaliya oo dalalka ugu awoodda badan Afrika ka mid ahayd. Waxa uu sheegay in habdhaqankii Siyaad Barre ee ahaa in cid kasta oo ka aragti duwan cadawgiisa tahay ay maanta ka muuqato xukuumadda Somaliland.
“Shirkii Kulmiye Cabdicasiis Samaale ayaa khudbad dheer oo quraan badan ku jiro ka akhriyay. Waxa uu intaas oo jeer ku celiyay cadawgeena cadawgeena iyada oo cidda uu toos ula hadlaya tahay xisbiga WADDANI iyo inta taageerta. Cadawgeenu wax buu inaga sheega, cadawgeenu sidaas buu yidhaahda_ marka ninkii dawladnimada iyo maamulka dalka hayay u arko dadkiika fikradda duwana in ay cadaw u yihiin qofka kuu cadawga ah sida aad ula macaamilayso waad taqaan, macaamilaadka socda ee taageerayaasha WADDANI lagu bartilmaameedsanayo ee dhibaatada loogu gaysanayo ee qaarkood lagu xidhxidhayo ee qaarkood ganacsigooda lagu dhibaataynayo waa cadaawaddaa uu sheegay Cabdicasiis Samaale. Cadaw bay u arkaan laakiin, anagu uma aragno; Kulmiye cadawg uma aragno, xukuumadda cadaw uma aragno dad walaalo ah oo dan iyo siyaasadi ka dhexeyso kala aragti duwan laakiin, ay tahay in ay bariista meel ku wada cunaan ayaanu u aragna laakiin, nasiib darro ‘Geela duqdiisii durdurisay aarankiisana maxaad u malaynaysa’ marka Sheekhoodii sidaas yahay Jabhaddoodiina maxaad u malanaysa? Idinka ayaa runtii ka jawaabi doona..”
“Faysal Wuxuu Ka Dhigay Xisbigii UCID Jeeble Uu Isagu Ku Shaqaysto”Xoghayaha Duulista Xisbiga WADDANI
Koox Fanaanii Ah Oo Ka Haajirtey Xisbiga Gabalkiisii Dhacay Ee KULMIYE Iyo Xisbiga WADDANI Oo Ay Ku Biireen Video
Afhayeenkii Hore Ee Xisbiga WADDANI Oo Ka Hadlay Xilka Qaadistiisa Iyo Guddoomiye Cirro Oo Uu…
Maxaad ugu baahataa Dollar adigoo Somaliland Shilin haysta?
Big-NEWS:- Codadka Been Abuurka ah ee kujira Sanaaduuqda Kulmiye kadul Barooranayo Waxa Samaysay Shirkada Sagaljet,
Newer PostWar Hadda Soo Dhacay Xukumadda Oo Joojisay Dhisme Laga Dhex-waday Dugsiga Sheekh Bashiir Ee Hargeysa Iyo Wasaaradda Waxbarashada Oo Bayaan Ka Soo Saartay
Older Post Halkan Ka Daawo Xukuumadda Somaliland Oo Sheegtay Inay Jabhadda Caarre Ugu Tegayso Gudaha Puntland Iyo Fariin Ay U Dirtay Maamulka Garoowe